I-Rachael's Place 2 bed apartment kufutshane ne-Esplanade
Eli gumbi linegumbi lokulala limbini likwindawo ekhuselekileyo kumphetho wesixeko kwaye linekhitshi langoku elineencopho zebhentshi zamatye, amagumbi okulala enkosi & ukumkanikazi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala kunye nebalcony. Kukho ichibi kwindawo entsonkothileyo kwaye iitawuli zamanzi zinikezelwe, kunye nebhedi, iti, ikofu, kunye neWIFI.
Indawo yokuhlala ibekwe kufutshane ne-Esplanade, i-Aquarium, iMartin Munro Park, iZiko lobuGcisa laseCairns, iSibhedlele saseCairns Base kunye nombindi wedolophu. Ixabiso elikhulu lemali!
Uya kusithanda esi sithuba sikufutshane nentliziyo yeCairns. Ukuhamba ngokukhawuleza kuya kukufumana kwi-Esplanade, i-pool ye-Lagoon, i-Aquarium, i-Martin Munro Park, i-Cairns Performing Arts Centre, iMyuziyam ye-Contemporary Art, kunye neSibhedlele saseCairns Base.
Indlu yeyakho... akukho kwabelana! Indawo inamagumbi amabini okulala (inkosi kunye nokumkanikazi), i-balcony, indawo yokuhlala kunye nekhitshi langoku. Kukwakho nempahla yokuhlamba impahla, ekwabelwana ngayo. Kukho i-pool kwi-complex kunye ne-pool towels zinikezelwe, kunye nelinen kunye neti kunye nekofu.
Izinto ezintle ezongezelelweyo onokuzilindela:
-I-WIFI yasimahla engenamda
- ibhotile yewayini ekufikeni
-cwilisa ikofu (hayi izinto zangoko!)
Nceda usibuze nayiphi na imibuzo onokuthi unayo😄
4.83 ·Izimvo eziyi-192
4.83 · Izimvo eziyi-192
Isitalato saseGrafton sihamba siye kutsho edolophini. Endleleni, uya kudlula eMartin Munro Park kunye neZiko elitsha lobuGcisa lokuSebenza. Indawo yokuhlala ililitye, iphoswe kwi-Aquarium, iMyuziyam yezobuGcisa beContemporary, i-Esplanade kunye ne-lagoon pool, kunye nokukhwela imoto emfutshane ukuya kwiigadi zeBotanical kunye nesikhululo seenqwelomoya. Isibhedlele saseCairns Base sikufutshane nabo baseCairns ukutyelela izigulana.
I love living in North Queensland!
Asihlali kwindawo ekufutshane kodwa siyakuvuyela ukufowuna, iitekisi okanye ii-imeyile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cairns North